၁။ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနနှင့်ပညာရေးဗဟို ဌာန(ACARE) စီမံကိန်းဖြင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးသုတေသန တက္ကသိုလ်တို့ ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများတွင် သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
(Molecular Biology and Biotechnology) ၂ နှစ်
(Post Harvest Technology) ၂ နှစ်
(၃) အစားအစာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဘာသာရပ် (Food
Science and Technology) ၂ နှစ်
(Agricultural Extension) ၂ နှစ်
(ခ ) ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်း
(MolecularBiology and Biotechnology) ၃ နှစ်
(Post Harvest Technology) ၃ နှစ်
(Food Science and Technology) ၃ နှစ်
(Agricultural Extension) ၃ နှစ်
၂။ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်
(၁) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့(B.Agr.Sc)ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(၂) အစားအစာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဘာသာရပ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့၊ မွေးမြူရေး
ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့၊ အစားအစာ သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် သိပ္ပံဘွဲ့
တစ်ခုခုရရှိသူများနှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၃) လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၄၅)နှစ်ထက် မကြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(၁) စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(M.Agr.Sc)ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(၂) အစားအစာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဘာသာရပ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာမဟာဘွဲ့၊ မွေးမြူ
ရေးဆိုင်ရာဆေးပညာမဟာဘွဲ့၊ အစားအစာ သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့်
၃။ လျှောက်လွှာပုံစံများကို ၁၄.၈.၂၀၁၇ (တနင်္လာနေ့)မှစ၍ စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာနတွင် ရယူ နိုင်ပြီး ပါမောက္ခချုပ်၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ လိပ်မူ၍ ၂၅ . ၉ . ၂၀၁၇ (တနင်္လာနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်လွှာပါအချက်အလက်များအား စိစစ်ပြီး မှန်ကန်ပါက စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်။
၄။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လျှောက်ထားသူ၏ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းတစ်ခုခုမှ ထောက်ခံစာမူရင်း၊ ပတ်စ်ပို့အရွယ် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ ဘွဲ့ လက်မှတ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့ကို တင်ပြရမည်။
၅။ ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
စဉ် ဘာသာရပ် ရက်စွဲ အချိန်
(က) သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် ၁၂.၁၀. ၂၀၁၇(ကြာသပတေးနေ့) နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီ
(ခ ) အင်္ဂလိပ်စာ ၁၃.၁၀. ၂၀၁၇(သောကြာနေ့) နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီ
၆။ ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လာရောက်သည့်အခါ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများကို တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည်။
၇။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို ၃၁.၁၀.၂၀၁၇ (အင်္ဂါနေ့)တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်၌ လူတွေ့စစ်ဆေးမည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် သင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်များကို ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ထုတ်ပြန် ကြေညာပေး မည်။
၈။ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန် ပြည့်စုံစွာ ရေးသားဖော်ပြခြင်း မရှိသော လျှောက်လွှာများ၊ မမှန်မကန် ဖြည့်စွက်ရေးသား ဖော်ပြထားသော လျှောက်လွှာများနှင့် အချိန်မီ မရောက်ရှိသော လျှောက်လွှာများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၉။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက စီမံရေးရာဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ – ၄၁၆၅၁၃ နှင့် စာမေးပွဲနှင့် ဘွဲ့နှင်းဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ – ၄၁၆၆၈၇ တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင် ပါသည်။